Aliağalılar Waxay Dooneysaa inay Ka Faa'iideysato Adeegyada ESHOT | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirAliağalılar waxay dooneysaa inay ka faa iideysato adeegyada ESHOT
16 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
aliagalilar wuxuu doonayaa inuu isticmaalo adeegyada eshotun
Aliağa, oo ah gaadiid lasiiyay dolmuş, ayaa dhibaato ku qabta gaadiidka magaalada. Rakaabku waxay ka cawdaan safarada, inta jeer ee safarada iyo banaanka.
Aliağa, halkaasoo boqolaal shaqaale iyo shaqaale dowladeed ah ay ku dhacaan wadooyinka ka yimaada xaafadaha fogfog ilaa shaqada, gaadiidka magaalada waxaa bixiya gawaarida yar yar. Basaska yar yar ee ka tagaya xarunta 'BZBAN' waxay rakaab ku qaadaan xaafadaha dhaadheer, meheradaha iyo bartamaha magaalada.
universalSida laga soo xigtay warkii Eren Saran; Hareket Waqtiga bixitaanka ee minibradaha ee udhaxeeya bartamaha iyo xarunta İZBAN waxaa loo dejiyay iyadoo kuxiran tareenka soo socda. Waa reebban tahay in rakaab lagu qaado lugta, laakiin waligeed ma baxeyso illaa inta dolmuş Aliağa laga buuxinayo. Safarkan wuxuu isu beddelayaa dhibaato bilowgii iyo dhammaadka shaqada. Magaalada halka safarka buuxa uu ka yahay 2.75, ardayda waxay u safri karaan 2.25 liras iyadoo la eegayo shardiga ay ku cusbooneysiinayaan oo ay wataan kaararka safarkooda la dhimay sanad walba.
Sarkaalka Ramazan Çelebi, oo ku nool İzmir isla markaana ka shaqeeya Xafiiska Canshuuraha ee Alia ,a, wuxuu cadeeyay in dolmuş udub dhexaadka u ah inuu subaxdii kaxeeyo rakaab taagan. Çelebi wuxuu yidhi, de Markaanu ka baxno meelaha shaqada ka baxno, waanu qabannaa İZBAN. Waxay u baahan yihiin inay kordhiyaan tirada duullimaadyada, gaar ahaan saacadaha shaqada. ”
MA KA FUDUDI KARAA ADEEGYADA ESHOT ”
Mustafa Dede, oo muddo 35 sano ah ku noolaa Aliağa isla markaana ka fariistay PETKİM, ayaa sheegaya in duullimaadyada ESHOT ay tahay inay ku shaqeeyaan gudaha Aliağa. Dede wuxuu yiri, ağa Aliaga hadda waa meel weyn, dadka halkan ku noolna waa inay ka faa'iideystaan ​​basaska degmada. Waxa nalooga tagay meelo kale. Fohol iyo Bergama waxaa ku jira ESHOT. Waxaan sidoo kale geynay basaska Bergama si aan ugu aado Şakran dhanka İZBAN laakiin waa ay laba jibbaaraan. Arrintaani sidoo kale waxay u baahan tahay qorshe, ”ayuu yidhi.
Intaas waxaa sii dheer, IZBAN waxay bixisaa intaad u socoto dalabka abuuraya culeys culus Caliagalı Dede wuxuu yiri, "Xitaa inaad tagto meesha kuugu dhow Aliağa'dan 12.40 rodol waa inay kujirtaa kaarkeena. Sida dadku u safraan markay u xisaabaan qoys ahaan. Maalinta ayaa imaanaysa, xitaa shan rodol ma ahan qofka. Marka wax badan ayaa socda wadada. Waxaan dooneynaa in codsigan sida ugu dhaqsaha badan looga saaro ”.
GAADIIDKA XUKUUMADA MUHIIM U AH
Cusmaan Yüksel wuxuu cadeeyay in taraafikada ay ku xayiran yihiin saacadaha shaqada meelaha qaarkood Aliağa wuxuuna intaa raaciyay: “TUBAŞ, PETKİM iyo isgoysyada bartamaha marwalba waa inay xirnaadaan. Gaar ahaan subixii subaxnimo iyo habeenkii fiidkii waxay la kulmaan dhibaatooyin. Waxaan gaari karaa 5-15 daqiiqo mararka qaarkood nus saac halkii aan ka shaqeyn lahaa waxaan imaan doonaa 20 daqiiqo inta lagu jiro xilliga xagaaga
Waxaan HALKAN KU HESHIISI KARAA QURUXDA LA DARAY
Gülay Karadana iyo gabadheeda Selvetnur, oo ku nool tuulada Horozgediği, ayaa sheegaya in basaska ka imanaya tuulada ilaa xarunta ay yihiin hal saac. Maalin kasta, Selvetnur wuxuu dhahay wuxuu u yimid iskuulka isagoo wata basas yar wuxuuna yiri, yolculuk Waxaan u safraynaa midba midka kale midka kale. Saddex rodol oo tegi doona saddex rodol oo lacag ah ayaanu siinnaa, immisa ayaannu toddobaad walba haysannaa? Xaaladda qoysaskeenna waa hubaal, waxaan isaga siin doonaa lacag ama waxaan nafteyda ka heli doonaa lacag jeeb ah. Markay ka baxaan wadada, waxaan halis ugu jirnaa in la jabiyo. Filo gaari qabow xilliga dugsiga kadib. Waxaan istcimaalaa qulqulka saqafka. Mararka qaar gawaarida ayaa dhaafa iyagoon hal saac qaadanin kan kalena sugaya. ”
Uz Dhibaatooyin badan ayaa na haysta. Gaadhiga saacad gudaheed ayaa jirta. Waxaan u adeegsanaa suuqkeena. Haddii bukaanku xaalad degdeg ah leeyahay, ma aadaysid. Waxaan rabnaa duulimaadyo badan. Dhibaato noocan oo kale ah ayaa ku haysata dhamaanba basaska tuulada ..
IZBANda Wareejinta Wareejinta Aliağalıların
71 boqolkiiba Malatiyaanka ayaa ku qanacsan adeega MOTAŞ
Bursal Mountaineers Ma doonayaan Baabuur cusub oo cusub si loo dhamaystiro
Karacaağaçlılar waxay rabaan buundada labaad ee Milas
Dadka Deegaanku waxay doonayaan Tareen Tareen, Laakiin Lama Yaqaanaan Magaaladda!
Shanlıurfalılar waxay rabaan inay si dhaqso ah u tababaraan
Maamulka Batman Oo doonaya Raybuss
Dadka reer Diyarbakir waxay rabaan taraamulka lagu sameeyay marxalad kasta oo doorasho ah.
Bursalılar Rabtaa Tareenka Xawaaraha Sare
Aliağa IZBAN station
Gaadiidka Magaalada Aliağa
Duulimaadyo muuqaal ah